#10 Igumbi w\_ Desk, SmartTV/Netflix kwiGrandview Av. - I-Airbnb
#10 Igumbi w\_ Desk, SmartTV/Netflix kwiGrandview Av.
Molo, ndinguGus. Wamkelekile ekhayeni lam! Indlu yam ibekwe encotsheni yeMt Washington, enembono entle yePittsburgh phambi kwakho. Indlu inkulu ngokufanelekileyo, inamagumbi amakhulu, ngoko ke uya kuba nendawo eninzi yolonwabo lwakho. Unokuhlala kwiveranda engaphambili ngelixa usonwabela isidlo ngombono. Okanye hamba imizuzu embalwa ukuya ethambekeni kwaye uyithathe ezantsi kwisikwere sesikhululo ngasemlanjeni. Nokuba ukhetha ukwenza ntoni na, ikhaya lam liya kubonelela ngokukhululeka, indawo ekhuselekileyo yokuphumla emva kosuku olude
Eli gumbi likhulu kwaye likumgangatho wesithathu wendlu. Inika umbono omkhulu wePittsburgh ngqo kwidesika yomsebenzi. Yonwabela ukubukela iNetflix ngelixa unombono ophakamileyo wePittsburgh endlwini.
-Ibhedi ye-Queen ekhululekileyo enelinen ezintsha
- Idesika yekhompyuter enesihlalo
- Isifudumezi esiphathwayo
-ITV + Netflix
- Ukuma ebusuku ngesibane
- Isitulo sesofa
Ikhaya lam likwindawo yokuhlala yaseMt. Washington. Kumgama nje omfutshane ukuya eGrandview ojonge kuyo, uya kuba neembono ezigqibeleleyo zamabala emidlalo asePittsburgh kunye ne-skyscrapers. Ungazonwabela iindawo zokutyela kunye nemivalo kwisitrato saseShilo nje iibhlokhi ezimbalwa, okanye uthathe indlela yokuya kwiSikhululo seSitrato ukuze ufumane amava awodwa. Le ikwayindawo egqibeleleyo yokubaleka kwaye ubambe ukutshona kwelanga entshona. IDolophu yimizuzu emi-5 kuphela yokuqhuba, kwaye iindawo zokutyela eziseMazantsi zisehla nje induli. Abamelwane bam banobuhlobo kwaye indawo yokuhlala ikhuselekile.
Izimvo eziyi-3 433
Ndinentlalontle kwaye ndiyakuthanda ukudibana nabantu abatsha. Xa ufika, abantu endikunye nabo okanye mna ndiya kukwamkela kwaye ndikubonise indlu. Singade sicebise ngeendawo zokundwendwela, okanye iindawo zokutyela kunye neebha onokuthi uye kuzo. Ukuba kukho nantoni na oyifunayo, ndithumele umyalezo nge-app ka-Airbnb kwaye siya kukuphendula ngokukhawuleza.
Ndinentlalontle kwaye ndiyakuthanda ukudibana nabantu abatsha. Xa ufika, abantu endikunye nabo okanye mna ndiya kukwamkela kwaye ndikubonise indlu. Singade sicebise ngeendawo zokun…